Home News (Dhoobo Daareed) oo sheegay in ay ka awood badan yihiin Deni iyo...
(Dhoobo Daareed) oo sheegay in ay ka awood badan yihiin Deni iyo Karaash “Taas cadaalad ma ahan”.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed), oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in habka xasaanad ka qaadidda saddexda mas’uul ee ugu sarreeya dowladda Puntland ay caddaalad-darro ka jirto.
Mudane Dhoobo daareed ayaa soo jeediyay in guddoomiyaha Baarlamanku uu la sinnaado madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, marka laga hadlayo xasaanad ka qaadidda.
Sida ku xusan Dastuurka Puntland, Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku waxaa lagu ridi karaa 44-cod, halka guddoomiyaha Baarlamanka lagu ridi karo 34-cod oo keliya.
Sidoo kale, wuxuu soo jeediyay in Dastuurka Puntland dib loo furo, si loo simo xasaanadda saddexda mas’uul ee ugu sarraysa dowladda.